2020 | 9 Izindawo ezihamba phambili zeTorrents
I-29 Meyi 2020 I-16 ngoFebhuwari 2019 por Bruno Esteves
Namuhla kunzima kakhulu futhi kunzima ukuthola okuhle amawebhusayithi zezifufula, ngenxa yezinye izindawo eziphoqelelwe ukukhubaza noma ngisho nangaphansi kwengcindezi noma izixwayiso.
Yingakho lolu hlu lulapha kuwe ngaphesheya ukuze ubone ukuthi yiziphi izingosi ezihamba phambili zomgwaqo futhi ugweme izingosi ezihamba phambili eziqukethe i-malware.
Inkulumo eyanele, ufike?
Uhlu Lokuphakathi Fihla
1 I-Pirate Bay
Izindawo zokuhamba ezihamba phambili zamahhala
O I-Pirate Bay uye waba yisayithi elihamba phambili kunazo zonke kuze kube yimanje, elihlaba umxhwele ngempela ukwazi ukuthi ubude kangakanani kwi-intanethi ngaphandle kokunikeza amathuba omncintiswano wakho.
Sikhuluma ngesayithi lesifufula esingaphezu kweminyaka eyi-15 yokuphila, kuyinto ngempela.
Uma ufaka le ndawo yezifufula “ezinkulu”, kufanele useshe okufunayo bese ukhetha inketho lapho usesha ukuthola lokho okudingayo kahle kakhulu.
Ungakwazi ukubona ukuthi iziphi izixhumi ezengeziwe ezongezwe kamuva, uchungechunge lwe-TV, izingoma noma ngisho ukubona ukuthi yiziphi i-100 eziphezulu esigabeni ngasinye sezinsuku ezimbili zokugcina.
Amaphuzu avelele esingayinikeza ngale sayithi yi:
I-Torrent engcono kakhulu neyaziwa kakhulu kuwebhusayithi emhlabeni jikelele
Abasebenzisi abane-Green Skull (Vip) noma i-Pink Skull (iTrust) kusho ukuthi bayasemthethweni futhi baphephile
Isigaba samazwana ukuze usize ukwazi ukuthi isifufula sinokwethenjelwa ngokuphelele
Isayithi esivele selibalekele ukuyeka okuningi futhi libonisa ukuthi lizoqhubeka ku-intanethi eminyakeni embalwa ezayo
Isayithi elinemihlomulo kuphela.
Uma kunomncintiswano I-Pirate Bay, ngokungangabazeki ukuthi kuyoba yiyo 1337X, isayithi elineminyaka eyi-12 yokuphila futhi eyathatha ukujula okukhulu ku-2016 ngenxa yokucima kwesinye sezizinda ezinkulu zezifufula, KickassIzixhumanisi.
Manje ngesakhiwo esihle kakhulu, sibamba abasebenzisi abaningi, kodwa futhi kufanelekile ukuthembela kwabaningi, isayithi lezifufula ezifezekisa lokhu, kufanele sihloniphe.
Ikhasi lokuqala linalo ibha lokwenza lokho okufunayo, uma ungenayo ilungelo lokusesha futhi ufuna ukwazi okusesigabeni ngasinye nje uchofoze kwenye yezinkinobho ngezansi kwibha yokusesha.
O 1337X kungaba isayithi elihleliwe kahle, okwenza umsebenzisi ajabule ukuhamba ngamakhasi, kodwa hhayi esigabeni ngasinye kuphela ongabona ukuthi yini ebonwayo emini noma phakathi nesonto, kodwa futhi ibonisa yiziphi izitayela zesonto noma phezulu kwe-100 yenyanga yamanje.
Isayithi lesifufula kulabo abathanda:
Yiba nokufinyelela ngokushesha kwesigaba oyifunayo
Yazi ukuthi yini ezenzakalweni zesonto
Awukwazi ukuthanda isayithi lesifufula njengofana 1337X.
O I-RARBG Kumele kube kithi I-3 ephezulu yamasayithi e-torrent, ngokuyinhloko ngenxa yemali enkulu ye-Torrents ukuthi isayithi linalo, kokubili njengokusha nokudala, okuyinto ehlaba umxhwele ngempela.
Ngakho-ke, uma ungatholi umfula owufunayo, siqinisekisa ukuthi uzothola lapha, unganqikazi futhi ufake enye yezingosi ezihamba phambili ze-Torrents kumabhukimakhi akho kakade.
Leli, njengezidlule, selivele likhona iminyaka engaphezu kweyishumi. Ikwazi ukunikeza ukunakwa okuningi emehlweni okuvamile, kodwa ngenxa yalokhu, ivinjelwe kwamanye amazwe.
Okuthile okugcizelela futhi I-RARBG, kufanele ube nezindaba zansuku zonke mayelana nama-movie noma uchungechunge uma uthanda ukuvuselelwa emhlabeni we-movie.
Sinikeza izinzuzo ezinhle kule sayithi:
Inani elikhulu le-Torrents
Umphakathi osebenza kakhulu
Abaphathi Abasebenza Kakhulu
Ngalesi sizathu i-RARBG ibe yiyona engcono kakhulu.
Uma ungaphesheya kwezwe, ubheke izixuku eziningi zama-movie, cishe uzolwazi YTS.AM, okungcono kakhulu kulabo abafuna ukuba nabo amabhayisikobho kukhompyutha yakho.
Ikhwalithi yamafilimu ayinakuphikwa, ikhetha nje ifilimu ukuthi ihlose, kusuka lapho ikhetha ifilimu I-HD (i-720p) noma ku I-HD egcwele (1080p), into ehlaba umxhwele kakhulu ukuthi ama-movie athatha isikhala esincane nekhwalithi engcono kakhulu abanayo.
Uma ufaka ikhasi lasekhaya, ungathola maduze i-movie ofuna ukubona ukuthi yamuva, njengoba kungenzeka kuma-movie athandwa kakhulu.
Uma ufuna ukucinga i-movie ngendlela ethuthukile, vele uye ku- "Dlulisa amehlo kumamuvi" ekhoneni eliphezulu kwesokudla, bhala igama futhi useshe.
Izinzuzo Ezinhle ZeSayithi:
I-movie best torrent site
Ukuhlela kulula kakhulu ukuyiqonda futhi kufaka kakhulu
Kubasebenzisi abafuna ukuba nama-movie ku-PC noma idivayisi yeselula
Abasebenzisi abane-intanethi elinganiselwe, le sayithi izoba ekahle ukuba ne-movie yakho
Uma ungumlutha we-movie, vakashela leli sayithi kakade!
Uma ufuna into elula kakhulu futhi ucinga amasayithi amathrensi amaningana, akukho lutho olungcono kune-Torrentz2.
Leli sayithi lilula kakhulu, ukungena nokucinga ukuthi yini oyifunayo, lapho ukwenza usesho kuzovela izixhumanisi eziningana kusuka kumasayithi ahlukahlukene futhi nje ukhethe okufaneleke kakhulu kuwe.
Nakuba kulula, iqukethe izinkinobho ze-3 ekhoneni elingenhla elingakwesokudla, usesho, oluzobonisa izithandani zakamuva ezengeziwe kumasayithi ahlukahlukene ezinsukwini zamuva, i-myTorrentz, ekhombisa izigaba ezivela kuma-movie, uchungechunge, njll.
Ekugcineni inkinobho yosizo, uma unemibuzo mayelana ne-Torrentz2.
Idizayini elula futhi ehlakaniphile
Kokuhle kokufuna umculo
Uma ungathandi izinkinga eziningi le sayithi ingaba yinto efanele kuwe.
Ngacabanga ukuthi akusiyo isayithi lokuthutha elalinikezelwe uchungechunge lwe-TV?
O EZTV igxile ngokuphelele kumbukiso wethelevishini, uma ulahlekelwe yisiphi isiqephu sochungechunge lwakho oluthandayo, akukho okungcono kunokuza kuleli sayithi uphinde useshe, ngoba amathuba okuthola angaphezu kwe-90%.
Lesi siza sadlula ebunzimeni obunye ukuze size senziwe umsebenzi ngo-Ephreli 2015, kodwa esasebenza kungekudala, manje sibonga umphakathi osebenzayo, EZTV kungaba ukukhetha okuphelele kulabo abathanda uchungechunge lwe-TV.
Ukugxila okuphelele Uchungechunge lwe-TV
Iziqephu zengeziwe nsuku zonke
Isikrini esibonakala kalula
Ungalahli isikhathi futhi uvele lapho ufune uchungechunge oluthandayo lwe-TV.
Ingabe wayazi isayithi? KickassIzixhumanisi?
Ngakho kubonakala sengathi kuzongena esithombeni.
O I-TorrentLanda inesakhiwo esikhumbuzayo KickassIzixhumanisi kanye nesamba esikhulu se-Torrents.
Njengoba kwenzeka ku- KickassIzixhumanisiLokhu phezu ekungeneni, sizobonisa nezifufula ethandwa kakhulu esigabeni ngasinye, kusuka ochungechungeni, amabhayisikobho, umculo, imidlalo, i-software, anime, izincwadi kanye nabanye.
Esinye ilukuluku ukuthi kubonisa ukusesha kwakamuva okwenziwa kusayithi ngabasebenzisi.
Idizayini enhle, khumbula “endala” KickassIzixhumanisi
Izidakamizwa ezidumile kuzo zonke izigaba logo ekhasini lasekhaya
Siyala ngokucacile le sayithi.
Ucabanga ukuthi ubonile konke?
I-LimeTorrents iyakwazi ukuhamba kahle futhi ilula kakhulu ukubheka ukubonga kwayo eyenza konke kube lula nakakhulu.
Okuthakazelisayo njengoba le sayithi isivele ineminyaka engaphezu kweyishumi futhi ikwazi ukukhetha abasebenzisi abaningi ngenxa yokusesha okulula kwalokho esikuhlosile.
Naphezu kwakho konke, kukukhumbuza okuncane kwe-1337x, uma uya ekhasini eliyisiqalo unayo ibha yokusesha noma mane uchofoze kwenye yezigaba ezingezansi.
Izifufula ezindala zingakhohlwa futhi ngaleyo ndlela zenze kube nzima ukuzithola, kodwa kuyinto enhle.
Asikwazanga ukuvumela I-TorLock kuhlu lwethu.
"Kodwa kungani?" Kungumbuzo okumele ubuze wona njengamanje, leli sayithi yize linemifudlana eminingi ngezigaba ezahlukahlukene, leli lingazihlukanisa nento ethize abanye abaningi abangenayo.
Sikhuluma ngezigaba ezifana ne-ebooks noma i-audiobooks, i I-TorLock kungaba yindawo enhle kakhulu.
Kodwa nakanjani akuwa ngemuva kwezinye izigaba.
Iwebhusayithi ngokwayo kulula ukuyiphatha.
Ama-eBook amaningi nama-audiobooks
Uma unesithakazelo ezincwadini ze-ebooks, lokhu kungaba kuhle kuwe.
Lena yi-10 yethu ephezulu yezindawo ezihamba phambili ze-Torrents, sithemba ukuthi sikusize ukuthi ukhethe indawo efanelekile kuwe.
Izigaba Amawebhusayithi Tags 1337X, phansi, eztv, limetorrents, i-rarbg, I-Pirate Bay, I -ThePirateBay, ithoshi, ukulayisha phansi, Izifufula, I-Torrentz2, yts, yts.am, zooqle Ukuzulazula kwendatshana
I-Google Amamephu inezici eziningi ze-Waze
I-Gearbest Tracking (i-Banggood, i-Aliexpress, i-GeekBuying, i-LightinTheBox)
Iyini i-IP yami?
Ukuhlolwa Kwesivinini se-Intanethi (SpeedTest)